झोल्लिएको स्तन यसरी कसिलो बनाउन सकिन्छ - samayapost.com
झोल्लिएको स्तन यसरी कसिलो बनाउन सकिन्छ
समयपोष्ट २०७६ जेठ १ गते १४:४९
थाइराइडले पनि स्तनको आकार बढाउने वा घटाउने काम गर्छ। थाइराइड भएपछि तौल बढ्ने क्रममा स्तन पनि बढिरहेको हुन्छ, डा. शाक्यले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा हार्मोन विशेषज्ञको रायअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
१७ वर्षकी एक नेपाली किशोरीको स्तन अत्यधिक ठूलो भएको अवस्थामा सबै जाँचपछि उनको स्तन घटाउने शल्यक्रिया गरिएको डा. शाक्यले बताए। उनको दुईवटा स्तनबाट १ किलो मांसपेशी हटाउँदा स्तन केही सानो भयो। उनको फेरी शल्यक्रिया गरेर उपयुक्त साइजमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो। यसरी स्तनको आकार घटाउँदा भने कुनै तन्तु काटिएर पछि ब्रेस्ट फिडिङका लागि दूध नआउने सम्भावना पनि हुन्छ।